600 Daawo:Salaad Cali Jeelle Oo Weerar Culus Ku Qaaday Xasan Sheekh Maxamuud, | khaatumo news online
Daawo:Salaad Cali Jeelle Oo Weerar Culus Ku Qaaday Xasan Sheekh Maxamuud,
May 21, 2020 - 2 Aragtiyood
Siyaasiga Salaad Cali Jeelle ayaa waxa uu maanta warbaahinta Qaar kula hadlay Muqdisho waxa uu si kulul uga hadlay Warkii shalay Arbacadii kasoo yeeray Ex Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud.
Mr Jeelle waxa uu shaaca ka dhigay in isaga ahaan ka xun yahay qaabka loo wajahay dib udhigista Dacwada Badda oo la filayey in la dhageysto Bisha soo socota balse dib loo dhigay.
Bisha Maarso 2021 ayaa la filayaa in dhageysiga Dacwadaas loo ballamay taas oo mucaaradku ay shaki geliyeen in sidaas Maxkamada ICJ ku dhawaaqdo.
Salaad Cali Jeelle ayaa ku Eedeeyey Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud inuu dano gaar ah ka lahaa Warkii uu shalay shaaciyey ee ahaa inuu Dawlada Soomaaliyeed 4 Sano isbadel ka keenin arinta Qadiyada Badda oo meesheedii ay joogto.
Si kasta oo ay tahay, Xasan sheekh waa ixtiraamaynaa maaddaama uu waddanka madaxweyne ka soo noqday.
Sida dad badani qabaan, shirkiisii jaraa’id kama muuqan wax masuuliyad ah ama dareen wadaagis ah, waxa uu u muuqday mid siyaasadaysan oo jeesjees ah.
In uu sidaa u hadlo way u gaadhay (sida ay dad badi qabaan) waayo cidna kulama xisaabtamin MUSUQMAASUQII ay ku kacday dawladdii uu hogganka u ahaay, bal taa beddelkeeda waxaa lagu abaal mmariyay xubin sharafeed baarlamaani ah.
Waxa kale oo ka FAKATAY oo uu ilaaway in uu ka tirsanyahay MADASHA. Shaqsiga ay hoggaanka u doorteenna waa SHEEKH SHARIIF, oo dawladdii uu hoggaamiyaha u ahaay lagu eedeeyo muran gelinta badda Soomaaliyeed.
Dhinaca kiiska badda. Dadka aadka ugu dhuun daloola ICJ, waxaa laga soo weriyay in kiisaskii maxkamadda sannadkan u qorshaysnaa dib loogu dhigay sannadka danbe iyadoo sababtu tahay COVID-19.
Midda kale, maxkamaddu xorbay u tahay in ay kiiska dib u dhigto iyo in ay qaaddo iyada oo tixgelinaysa DURUUFAHA ku xeeran codsiyada la soo gudbisto. Waxa aan qabaa in aan taa dawladda lagu eedayn karin haddaan dano kale laga lahayn.
Intaa waxaa dheer, meeshan wax qarsooni majiraan; xagalo wax gunti la geliyo ka weyn. Soomaaliya markay farriin u dirayso ICJ waa in ay nuqul siisaa Kenya, sidaa si le’eg baa Kenyana looga baahan yahay. Soo kale, ICJ markay u jawaabto Soomaaliya waa in ay Kenyana nuqulsiisaa; sidaasay U DAAHFURAN tahay.
Marka waxa aan la yaabaa siyaasiyiinta leh dawladdu waxbay qarinayDaa, waar wax qarsooni majiraan ee dadka hawareerinina.
Tan ugu danbayDa, ICJ codsigii ugu MUHIIMSANAA bay Soomaaliya u samaysay oo ah in ay AQBALEEN in ay kiiska galaan, iyadoo Kenya ku doodaysay ICJ in aysan laaqi u ahayn in ay kiiska gasho. taa xaggee lagu ilaaway?!
Madasha, oo uu Xasan Sheekh, xubin ka yahay, yaysan fursad siyaasadeed ka dhex raadin arrimo iyaga ku soo noqonaya. Waxaan oran karnaa, NIMANKAAS WAA KA FAKATAY doorkan ee dib ha ugu noqdaan markale kuway dhexda uga xirnaayeen sidii KOROOWGII si ay wax ka mnaraya uga soo qaataan.
FG: Anigu BATAATANBA ma taageersani kooxda BAXNAANO, waayo wax MASIRI ah oo ay dawladnimadii loogu hanwaynaa ay ka qabteen iima muuqato.
Dastuur lama hayo, guddi maxkamadeed lama dhisin iska daa garsoor madaxbanaane, xukuumadda inta badan baarlamaankaa laga soo doortaa si aan laysula xisaabtamin, laba laba jinsiyadood baa lawada wataa, xeerar kuwaa xakamaynaya lama meel marin saa dawlad wanaag looma jeedee.
Wax WAARA oo MASIIRIYA oo aad dadka iyo dalka u qabateen majiraan sida aan qabo. Waxa aan marka alle ka baryaynaa in dawlad ka khayr badan kuwan iyo kuwii hore in alle noo keeno. Wbt
Hillac, Awbirqaaye saaxiibkii, aad baad ugu mahadsan tahay cabirka mucaaradnimo ee wax dhiska, oo ah waxay N&N u baahan yihiin in loo tilmaamo waxkasta oo ka dhiman shaqadii loo igmaday. Waxaan maqlay R/wasaare Khayre, oo lataliye u ahaan jirey Culusaw, baa kula taliyey inuu ICJ dacwad u gudbiyo ku saabsan badda Somaliya. Waxay noqonaysaa dacwadu in ay amaanteeda leeyihiin N&N ee aanu lahayn Culusa. Meesha sartu ka qudhuntay waa duulkii dalka isugu daray dhac baahsan iyo musuq iyo gudoon jilicsan, inay maantana la safan yihiin cadawgii ummadda, oo aanay qarsanayn. Shacabku waa in tuulo kasta iyo magaalo kasta laga mudaharaado Xalweyste iyo badar iyo beeso. WBT